कोरोना संक्रमितभन्दा निको हुने बढे | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार कोरोना संक्रमितभन्दा निको हुने बढे
२०७७, १ श्रावण बिहीबार ०८:५०
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ११६ जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनामुक्त भई ६ सय ९७ जना डिस्चार्ज भएका छन् । यसले दैनिक सङ्क्रमित हुनेभन्दा निको हुनेको सङ्ख्या बढेको देखाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार, बुधबार काठमाडौंंमा ७ सहित १ सय १६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १७ हजार १ सय ७७ पुगेको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका २६ वटा प्रयोगशालामा ५ हजार ९० जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
उनले हालसम्म २ लाख ९८ हजार ८ सय २९ को पीसीआर परीक्षण गरिएको बताए । गौतमले हालसम्म आइसोलेसनमा ६ हजार १ सय १३ जना रहेको जानकारी दिए । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको जम्मा संख्या ११ हजार २५ पुगेको छ ।यस्तै, ६ हजार ११४ सक्रिय कोरोना सङ्क्रमित रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । देशभरका क्वारेन्टाइनमा २४ हजार ५ सय २७ जना रहेको उनले बताए । गौतमले थप १ कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको बताए ।
Previous articleआज कर्कट संक्रान्ति अर्थात् ‘लुतो फाल्ने’ दिन, के हाे लुताे फाल्ने भनेकाे ?
Next articleसंकटमा पनि असारे भुक्तानी सीमाभन्दा बढी